Oothixo abathathu abaphambili bobuHindu | Ukuhamba kwe-Absolut
Oothixo abathathu abaphambili bobuHindu
daniel | | Indiya
El unkolo yamaHindu Yenye yezona nkolo zindala emhlabeni, ezenziwa ngabantu abangaphezulu kwezigidi ezili-1.100 kwilizwekazi laseAsia nakwezinye iindawo zehlabathi. Vula I-Indiya, iPakistan, iNepal, iBangladesh neMalaysia kukho abaninzi abalandela imigaqo yayo kwaye banqula oothixo abathathu abaphambili bobuHindu.
Ngokungafaniyo nezinye iinkonzo, aba thixo banqulwa kubomi bemihla ngemihla. Ngaphezulu kwezinto ezingabonakaliyo nezikude, zibonwa njengamanani ayinxalenye yenyani yemihla ngemihla. Kukho imisinga emininzi kunye nezikolo ngaphakathi kobuHindu.
Ngaphakathi koothixo bamaHindu abahlukeneyo, ayingabo bonke oothixo abakwicandelo elinye. Akukho ngaphantsi koothixo abazizigidi ezingamashumi amathathu, kodwa ayizizo zonke ezibaluleke ngokulinganayo kwaye zihlonitshwa.
Aba bathixo abathathu abaphambili bobuHindu: UBrahma, uVishnu kunye noShiva. Benza i Ukuqala ("Ezi ntlobo zintathu" kwiSanskrit) kwaye zimele ngokwahlukeneyo imijikelezo yendalo, ulondolozo kunye nokonakaliswa kwendalo iphela.
Ngokwesiko lamaHindu, Brahma Unguthixo ongumdali weNdalo iphela. Yonke into ekhoyo ehlabathini uyenza. Ifuzisela ubulumko kunye nobukrelekrele.
UBrahma unabafazi ababini: uSaraswati, uthixokazi wolwazi, kunye noSavitri, oyintombi yothixo welanga. Dharma (umdali uthixo wenkolo) kunye Attri. Ukongeza, ungutata woonyana abalishumi kunye nentombi ezivela kuye iintlanga ezahlukeneyo zabantu.
Ngokwesiko, indawo ahlala kuyo ikhona IBrahmapura, isixeko esimi phezu koThixo INtaba iMeru, kwelinye icala ithathwa njengeziko lehlabathi.
Ukumelwa kweBrahma, uthixo ongumdali weNdalo iphela yobuHindu
La Ukumelwa kwe icon yeBrahma Yileyo yexhego elinebala elibomvu elineentloko ezine. Ezi ndevu zimhlophe zibonisa ubulumko. Ngamnye kwimilomo yomine ufunda enye yeeVedas ezine okanye isicatshulwa esingcwele. Ukwanazo neengalo ezine ezinezandla eziphethe izinto ezahlukeneyo:
Isikhongozeli samanzi, umthombo wobomi.
Umtya wamaso (yapha malaukubala iminyaka ye-Universe.
Isicatshulwa esivela kwiVedas.
UBrahma ubonakala kwimifanekiso eqingqiweyo nakwimizobo engasemva inkumba enkulu egama linguJansa, intaka yobuthixo ekuvumela ukuba uhambe ubude nobubanzi bendalo iphela.
Njengomdla, kufanele kuqatshelwe ukuba iBrahma ikwayindawo eyaziwayo yeebhiya eIndiya. Abantu abaninzi bayayisela ngaphandle kokuthathelwa ingqalelo njengengcwele.
Ukuba uBrahma nguthixo ongumdali, ubuHindu buqwalasele Vishnu njengothixo olondolozayo. Ungumgcini wocwangco, uxolo nothando kwiNdalo iphela. Unguthixo onamandla ogcwele ukulunga, okwaziyo ukwenza ezona zimangaliso zingacingekiyo nokuba ulwa kakhulu kwaye ukhohlakele needemon nezinto ezimbi.
Ngokwesiko, ikhaya likaVishnu lisendaweni ebizwa Vaikhunta, emi phezulu ngaphezu kwesibhakabhaka ngaphaya kweentaba zeHimalaya. Inkqubo ye- Imigulukudu, umlambo omkhulu oyingcwele waseIndiya, uphuma ezinyaweni zakhe. UVishnu utshatile Lakshmi, uthixokazi wobuhle nobutyebi.
Ukubonakaliswa kweklasikhi kukaVishnu yile yokubonakala komntu, isikhumba esiluhlaza esineengalo ezine. Esifubeni sakhe kukho ilokhwe yeenwele ezimhlophe. NjengoBrahma, naye uneempawu ezine azibambe kwisandla ngasinye kwezine:
Igobolondo le-conch (shanká) elakha lavakala emva koloyiso lomkhosi.
Imallet yegolide athe uVishnu watyumza ngayo iintloko zeedemon.
Iringi ebukhali kakhulu (ISudarshana chakra) ayisebenzisayo ukuxhela iidemon.
UVishnu uhlala ebonwa ehleli enkulu Intyatyambo yelotus Ukhatshwa nguLaksmi, elele esifubeni sakhe.
Ilungu lesithathu leTrimurti UShiva, uthixo otshabalalisayo. Ngelixa uVishnu emele ukuqala kobomi, uShiva ufuzisela isiphelo. Indima yayo ibalulekile ngaphakathi kobuHindu, apho ukufa kufanelekileyo kuqala ukuze kuvele. Kungenxa yoko le nto engafanele kuthathwa njengothixo okhohlakeleyo, ngokuchaseneyo.
Amanye amagama akhe "ayingozi" okanye "umniki wolonwabo." Ukwanguthixo womdaniso, ke umculo kunye nomdaniso ubaluleke kakhulu kwiminyhadala kunye namasiko ajikeleze inani lakhe.
Umfazi kaShiva uthixokazi IParvati, owayenabantwana abathathu kunye naye: IAiapa, Ghanesa kunye neKartikeia, Ifazwe yezithixo. Indawo yokuhlala kaShiva ikwindawo ye Intaba kailash, okwangoku ikummandla wamaTshayina.
Umfanekiso oqingqiweyo kaShiant kwitempile yamaHindu
Umfanekiso weklasikhi weShiva yile yogi inesikhumba esiluhlaza maxa wambi eboniswa ehleli kwindawo yokucamngca nangamanye amaxesha njengomdanisi omnye wemilenze yakhe esemoyeni. Entanyeni yakhe a inyoka efuzisela amandla abalulekileyo.
Uye Amehlo amathathu, enye yazo ibekwe ebunzi. Eli liso lesithathu limela inqwelomoya, nangona ngokwamasiko athile amehlo amathathu abonisa ukwahlulwahlulwa kwexesha ezintathu: elidlulileyo, elangoku nelizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Oothixo abathathu abaphambili bobuHindu
Imisebenzi yenkosi uAlejandro Obregón
Intsomi yomlingo kwiChurumbelo Waterfall